Guuleed “Waxaan ahay tartame cusub, waana la ii tijaabin karaa” | Somalia News
Guddoomiyaha xisbiga Sahan C/kariin Xuseen Guuleed oo todobaadkan la hadlay wargeyska Daily Nation ee dalka Kenya ayaa sheegay inuu doonayo barnaamij dib u dhis ah oo dalka Soomaaliya ka hirgala.
C/kariin Guuleed oo la rumeysan yahay inuu isku soo sharaxi doono xilka Madaxweynaha Soomaaliya, ayaa sanadkii 2017 arrimo caafimaad awgeed isaga casilay xilkiisii Madaxweynaha Galmudug.
Saddex sano kaddib oo uu saaxada siyaasadda ka maqnaa, dhowaan sheegay inuu dib ugu soo laabtay siyaasadda ayaa yiri “Waxaan rabaa inaan mideeyo Soomaalida oo dhan, Waxaan hormarinayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee Soomaaliya, waa sida kaliya ee aan ku baabi’in karno saboolnimada, shaqo ugu abuuri karno dhallinteenna, ugana hor istaagi karno dambiyada iyo argagixisanimada”. ayuu u sheegay Daily Nation.
C/Kariin ayaa cadeeyay in uu doonayo Soomaaliya oo nabad kula noolaata dalalka dariska iyo guud ahaan caalamka.
Mr Guuleed wuxuu horey u ahaan jirey shaqaalaha gargaarka oo uu ka ahaa agaasimaha koox samafal ah, wuxuu ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo amniga ee Soomaaliya xilligii dowladdii Xasan Sheikh Maxamuud, kadibna waxa uu noqday madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug.
Tan iyo 2004-tii, markii dib u dhiska Soomaaliya uu bilaabmay dagaalladii sokeeye kadib, dadka cusubi waxay inta badan ku guuleystaan doorashooyinka, weligoodna Soomaaliya dib uma dooran Madaxweyne ay hore u dooratay, xaqiiqda ayaa ah inuusan Madaxweyne hore iyo hadda midna u ahayn Soomaaliya ayuu u arkaa fursad uu guul ku gaari karo.
The post Guuleed “Waxaan ahay tartame cusub, waana la ii tijaabin karaa” appeared first on Jowhar Somali news Leader.
Previous articleMeydka sarkaal ka tirsanaa madaxtooyada oo laga helay hotel ku yaalla Muqdisho
Next article“Sancho leaves Dortmund, but not now”